IBafana ingompetha beCosafa Cup, kuzalwe nezihlabani ezintsha
July 18, 2021 Impempe.com
Kulamule amaphenathi phakathi kweNingizimu Afrika neSenegal, lapho zishukane khona zaze zabukana emdlalweni wamanqamu weCosafa Cup ka-2021, eNelson Mandela Bay Stadium, ePort Elizabeth, ngeSonto.
Kulo mdlalo kugcine kuwine iNingizimu Afrika ngo 5-4 kumaphenathi ngemuva kokuthi umdlalo uphele ngo 0-0 emizuzwini engu-120. Ukuwina kweBafana Bafana le ndebe kuchaza ukuthi isiyiqukula okwesihlanu selokhu yaqala ukudlalelwa ngo-1997.
Iqembu lakuleli ligcine ukuwina iCosafa Cup ngo-2016 lapho lishaye khona iBotswana kowamanqamu. IBafana kuyifanele ngayo yonke indlela ukuthi lo mqhudelwano obese kungokuka-20 udlalwa.
Lokhu kufakazelwa ukuthi ayidedelanga nelilodwa igoli emidlalweni eyisithupha eyidlalile njengoba igcine ingompetha nje. Lokhu kukhombisa ukuthi lihle kakhulu ikusasa leBafana njengoba bekudlala abadlali abayibamba lapha ekhaya kuphela.
UHelman Mkhalele kumele ukuthi ujabule lapho ekhona ngoba uke wakubalula ukuthi kusemqoka ukuwina iCosafa Cup ngoba abanye babadlali abebemele iBafana bazobadinga emidlalweni yokuhlungela iNdebe yoMhlaba. Ayikho imidlalo ezodlalwa yiBafana yobungani ngaphambi kokuthi idlale eyokudlungela u-2022, eQatar (iNdebe yoMhlaba).
Phakathi kwabadlali abaphakamise izandla nabangase babizwe nakanjani uma sekulungiselelwa imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba, singabala uSiyethemba Sithebe (AmaZulu FC), Veli Mothwa (AmaZulu FC), Njabulo Ngcobo (Kaizer Chiefs), Rushine De Reuck (Mamelodi Sundowns), Sepana Letsoalo (Bloemfontein Celtic) nabanye.
Emdlalweni wangeSonto okuhlalukile ukuthi iBafana ibiyinhle kakhulu uma ivala emuva kodwa bekungahambi kahle neze ekuhlaseleni kwayo. Lokhu kufakazelwe ukuthi yize ibiliphatha isikhathi eside ibhola kodwa bekunzima kakhulu ukufika emapalini eSenegal.
FUNDA NALA: UMacuphu uthembisa okwehlukile kwiTS Galaxy ngesizini ezayo
Emdlalweni odlalwe ngaphambi kwalona i-eSwatini igcine ilale endaweni yesithathu kulo mqhudelwano ngemuva kokushaya iMazombique ngo 4-2 sekukhahlelwa amaphenathi. Umdlalo uphele ngo 1-1 emizuzwini engu-90 ngoba awuyanga esikhathini esengeziwe njengowamanqamu.
IMozambique iyona eshaye igoli kuqala ngomzuzu ka-39, kanti libekwe enethini uMartino Thauzene. Elokulinganisa le-eSwatini lize noKhethokuhle Mkhontfo ngomzuzu ka-89.
Ezakamuva, iBafana Bafana, Ibhola lomhlaba
Previous Previous post: Bagonqile abamaGlug-Glug abatholwe benegciwane leCovid-19
Next Next post: IRoyal AM igoloze lwaze lwagoba kwiPSL uphondo ngecala